21228၊ 2in1 Car Vacuum Cleaner & Tyre Inflator - Goodao Technology Co., Ltd.
21230၊ 90W ကားဖုန်စုပ်စက်
11997၊ Digital Air Compress...
11632, 12V ကားတာယာ inflator
21234၊ 90W ကားဖုန်စုပ်စက်
21228၊ 2in1 Car Vacuum Cleaner & Tyre Inflator
1) 12V60Watt ကားဖုန်စုပ်စက်
2) ကားတာယာကို ဖောင်းကားရန်အတွက် 300PSI MAX လေကွန်ပရက်ဆာ၊
3) ကားစီးကရက်မီးခြစ် ပလပ်ဖြင့်3မီတာ လေးလံသော ကြေးနီကြိုးဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။
4) အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ဇကာ၊ အစို နှင့် အခြောက် သင့်လျော်ပါသည်။
1) ABS ပစ္စည်း။
2) Vaccum/Off/Compressor ခလုတ်၊
3) အမှိုက်များကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပြီး ဇကာဖြင့် ဆေးကြောပါ။
5) ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ- နော်ဇယ် အဒက်တာ ၂ ခုနှင့် အားကစား အပ် ၁ ခု၊
1 လေဟာနယ် နော်ဇယ်; ဖိအားတိုင်းကိရိယာပါသော လေပိုက် ၁ ခု
ပစ္စည်း ABS, PS, ကြေးနီ
ထုတ်ကုန် အတိုင်းအတာ ၃၆*၁၀.၅*၁၅စင်တီမီတာ
Suction Flow ၂.၅
Suction Media အစိုနှင့်အခြောက်
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ လေဟာနယ်အတွက် 12V60Watt၊ တာယာ inflator အတွက် 12V10A
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ ကားစီးကရက်မီးခြစ် adapter နှင့် 3m၊ 12V DC လိုအပ်သည်။
ပစ္စတင်နှင့် ဆလင်ဒါ 19mm၊ ဂန္တဝင်စတိုင်
Inflating Speed Appr, 7-9mins (195/60R14 0-30PSI မှ)
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ suction adapter ၁ ခု၊ နော်ဇယ် ၂ ခု နှင့် လေဝင်ရန်အတွက် အပ် ၁ ခု၊ တိုင်းထွာပါသော လေပိုက် ၁ ခု
Outer Pack 45.5*38*47CM၊ 12pcs/ctn၊ 16/15kgs
ကုန်တင်ကားကြီးများတွင် စက်ကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
အချိန်တိုအတွင်း လေဖိအား လျင်မြန်စွာ မြင့်တက်လာပါက (သုံးစက္ကန့်အတွင်း 689KPa သို့) လေဖိအား ပိတ်ဆို့ပြီး တာယာအတွင်းသို့ လေဝင်ခြင်း မရှိကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။ ပါဝါကိုချက်ချင်းပိတ်ပါ၊ လေနော်ဇယ်ကိုဖယ်ရှားပြီး ပြန်လည်လည်ပတ်ပါ။
15 မိနစ်တိုင်း လေဖြည့်သွင်းပါ၊ အနားယူတာက အကောင်းဆုံးပါ။
12V စီးကရက်မီးခြစ်ပါဝါ ထည့်သွင်းမှုအတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. စီးကရက်မီးခြစ်နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါ အသုံးပြုနိုင်သည့် စီးကရက်မီးခြစ် ပလပ်တစ်ခုပါရှိသည်။
2. ကားများ၊ စက်ဘီးများနှင့် ဆိုင်ကယ်များအပြင် ဘောလုံးနှင့် ရော်ဘာလှေများ၏ တာယာများကိုပါ ဖောင်းကားရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော လေဝင်သည့် နော်ဇယ်အမျိုးမျိုးကို တပ်ဆင်ထားသည်။
တစ်စတုရန်းပေလျှင် ပေါင်အတွင်းရှိသော တာယာပေါင်ချိန်ချိန်စက်၏ အနီရောင်အပြင်ဘက်ကွင်းအပါအဝင် တာယာပေါင်ချိန်တိုင်းကိရိယာကို လူအတော်များများက မည်သို့ကြည့်ရှုရမည်ကို မသိကြပါ။ အနက်ရောင်အတွင်းစက်ဝိုင်း၏ ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းစင်တီမီတာသည် 2.2 သို့မဟုတ် 2.8 ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အတွင်းစက်ဝိုင်း၏အနက်ရောင်နံပါတ်သည် လုံလောက်သည်ထက်ပိုပါသည်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် အောက်ပါလင့်ကို ကြည့်ပါ။
အနီရောင်အပြင်ဘက်စက်ဝိုင်းသည် အင်ပါယာယူနစ် psi (ပေါင်/စတုရန်းလက်မ)၊ အတွင်းစက်ဝိုင်း၏အနက်ရောင်ယူနစ်မှာ kg/cm^2 (ကီလိုဂရမ်/စတုရန်းစင်တီမီတာ) ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာယူနစ်စနစ်ရှိ စံယူနစ်မှာ N/m ဖြစ်သည်။ ^2 (နယူတန်/စတုရန်းမီတာ)၊ အမည်ရ Pa (ပါစကယ်)။
3. ပုံမှန်လေထုဖိအားသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.01*10^5 Pa ဖြစ်ပြီး 10.1 Newton/cm² ဖြစ်ပြီး 1.03 kg/cm² ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖျင်းပြောရလျှင် စံလေထုဖိအားသည် သင့်နာရီပေါ်ရှိ အနက်ရောင် 1 အနေအထားဖြစ်သည်။ ပိုမိုတိကျစေရန်၊ ၎င်းကို သင့်နာရီပေါ်ရှိ 1.03 တွင် ဗြိတိန်ယူနစ်သို့ ပြောင်းသင့်သည်။ 1 kg=15PSI
1. ရော်ဘာပိုက်၏အပေါ်ဆုံးအဆို့ရှင်ကို တာယာအဆို့ရှင်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ထည့်ပါ။ တာယာဖောင်းပွသံကို ကြားလိုက်တာနဲ့ လေက လည်ပတ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ valve wrench ကို အတွင်းဘက် 90 ဒီဂရီကို ချက်ခြင်း နှိပ်လိုက်ပါ၊ လေက လွတ်မြောက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
2. ပလပ်ကိုထုတ်ပြီး စီးကရက်မီးခြစ်ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
3. ငွေကြေးဖောင်းပွမှုစတင်ရန် မော်တာကိုဖွင့်ပါ။
4. လေပွလာသောအခါ၊ ညွှန်ပြချက်ညွှန်ပြသည် လေဖိအားနှင့်အတူ မြင့်တက်လာပြီး ညွှန်ပြချက်ကြီးသည် ကား၏သင့်လျော်သောတာယာဖိအားသို့ရောက်ရှိသောအခါ (ယေဘုယျအားဖြင့် ကားတာယာဖိအားမှာ 193-241KPa) ပလပ်နှင့်လေကိုထုတ်ပါ။ နော်ဇယ်။
ယခင်- 21227, 12V ကားဖုန်စုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: 21230၊ 90W ကားဖုန်စုပ်စက်နှင့် လေထိုးစက်
21230၊ 90W ကားဖုန်စုပ်စက်နှင့် လေထိုးစက်
21282R ကြိုးမဲ့ ဖုန်စုပ်စက်